htc inovavarira january 25 kutanga kutumira Android 6.0 kune t-nhare htc imwe (m8)
Kuru Nhau & Ongororo HTC inovavarira Ndira 25 kuti itange kutumira Android 6.0 kuT-Mobile HTC One (M8)
Vhiki kubva mangwana ndiJanuary 25 uye ndiro zuva iro T-Mobile vanyoreri vachitamba iyo HTC One (M8) vanogona kutanga kugamuchira Android 6.0 kuburikidza neOTA yekuvandudza. Iyo tweet yakatumirwa neChishanu naMo Versi, HTC & apos; s VP yeChigadzirwa Management, yakati iyo yekuvandudza ichiri mubazi. Akawedzera kuti pane chinangwa chaNdira 25 pakuparadzirwa kwayo.
Iyi inogona kunge iri yekupedzisira huru yekuvandudza yeHTC One (M8), iyo yakavhurwa ne Android 4.4 pre-yakaiswa kumashure munaKurume, 2014. Kubva ipapo, foni yakagadziridzwa ku Android 4.4.3 uye Android 5.0, Android 6.0 inounza nazvoGumi nembiri, iyo inowedzera hupenyu hwebhatiri rwefoni nekuiisa muhope hope kana isiri kushandiswa.Google Now paTapicharatidza mhedzisiro yekutsvaga zvichibva pane zvirimo zvinoonekwa pachiratidziro panguva yekukumbira kwekutsvaga, uye shanduko kumvumo dzeapp inovabvumidza kupihwa kana kurambidzwa pachimiro-ne-chimiro.
Usati watanga iyo yekuvandudza maitiro, varidzi veHT One (M8) paT-Mobile vanofanirwa kuona kuti vakabatana neWi-Fi network. Pamusoro pezvo, bhatiri riri pachigadzirwa rinofanira kubhadhariswa kusvika makumi mashanu muzana.
Iyo T-Mobile yakanzi HTC One (M8) inogona kuvandudzwa ku Android 6.0 kutanga muna Ndira 25
HTC Imwe (M8)
mabviro: @moversi kuburikidza TmoNews
nzira yekunyora faira muJava
Maitiro ekuvhura PIN kana pateni-inodzivirirwa Android smartphone
Samsung Galaxy S7 Edge vs LG G4: kutanga tarisa
Heano maitiro ekuwana yako $ 29 iPhone bhatiri kutsiva kubva kuApple
Google haigone kukudzivirira kubva kuJoker malware, saka inguva yekudzima maapplication ane ngozi
Microsoft Lumia 640 ajoina AT & T & apos; s prepaid GoPhone lineup, inokudzosera kumashure $ 79.99